Banaanbax weyn oo laga hortegay Xisbiga English Defence League EDL oo ka dhacay Leicester.(Sawiro)
February 4, 2012 - Written by
Leicester:-Kumanaan ka mid ah bulshada ku nool magaalada Leicester ayaa kala hortegay banaanbax weyn kooxda English Defence League EDL oo ah koox Nazi ah oo neceb dadka ajaanibta ah kuna dooda in ay ka soo horjeedaa dadka muslimiinta ah ee ay ugu yeeraan Xagjirka , kumanaan ka tirsan ciidanka Booliska ee magaalada Leicester oo loo carbiyey in ay ka hortagaan banaanbaxyada rabsahadaha wata.
Kooxda English Defence League EDL ayaa maanta oo sabti ah ku balamay in ay banaanbax ka dhigaan magaalada Leicester oo ah magaalo ay aad ugu badan yihiin dadka Muslinka ah kuana leeyihiin Macaahid iyo Masaaji´do waaweyn,Kooxdaan English Defence League EDL ayaa horay iskugu dayey in ay banaanbaxyo ka sameeyaan magaalooyin kale oo ay ku badan yihiin dadka muslinka ah gaar ahaan magaaloo yinka Birmaham iyo Manchester iyagoo halkaas kala kulmay banaanbaxyo looga soo horjeedo.
Saraakiisha Ciidanka ayaa kulamo la qaatay masuuliyiinta masaajida waaweyn ee magaalada Leicester iyagoo masaajida keenay ilaalo gaar ah dhinac dowlada Hoose iyo Skuulada ayaa waraaqo iyo fariimo u diray dadka shacabka ah iyagoo ku wargedliyey in xisbiga English Defence League EDL uu maanta oo sabti ah banaanbax ka dhigi doono magaalada Leicester.
Bulshadac ku nool magaalada Leicester ayaa mehrajaano ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan in xisbiga English Defence League EDL in ay banaanbax kka dhigaan magaalada Leicester ku muujiyey, dadka banaanbaxa kala hortegay ayaa waxaa ay ku qaylinayeen ma doonayno EDL ,dadka Leicester waa mid , uma baahnin xisbi Nazi ah oo dadka kala saaro. bulshada Muslinka ah iyo kuwa Soomaalida ayaa maanta taxdar ka muujiyey iyo sida ay uga soo horjeedaa Xisbiga English Defence League EDL.
Ciidanka Booliska magaalada Leicester iyo ciidamo lagu soo xoojiyey ayaa si aad ah u sugayey maanta amaanka guud ee magaalada gaar ahaan Centerka magaalada oo ah goobta ay banaanbaxayaashu iskugu soo baxeen iskagana horjimaadeen.